Ngaba i-Snapchat ibalulekile kubathengisi? | Martech Zone
NgoMgqibelo, nge-4 kaFebruwari ngo-2017 NgoMgqibelo, nge-13 kaFebruwari ngo-2021 Douglas Karr
Kwi-impromptu poll kwindawo yethu yaseMartech, I-56% yabaphenduliyo bathi abanazicwangciso kulo nyaka zokusebenzisa i-Snapchat kwintengiso. Yi-9% kuphela echazayo ukuba bayayisebenzisa kwaye abanye bathi bebengekagqibi. Ayisiyiyo le nto yokumisa phezulu kwinethiwekhi ekhula ngokukhawuleza.
Ngokwam, ndiyayifumana iyabhideka kwaye isengumbumbulu ngalo lonke ixesha ndivula usetyenziso. Ekugqibeleni ndifumana amabali kwaye ndithabathe inethiwekhi, kodwa ngaphandle konxunguphalo. Ngokuposa ii-snaps zam, kunqabile ukuba ndenze.
Nge-150 yezigidi ezisebenzayo zemihla ngemihla kunye ne-60% yabo epapasha yonke imihla, nangona kunjalo, mhlawumbi akufuneki ndingahoyi iqonga. Ngapha koko, ngalo naluphi na usuku olunikiweyo, i-Snapchat ifikelela kwi-41% yabo bonke abaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-34 ubudala kwi Eunited States.
Ngobasebenzisi beselfowuni kuphela, i-Snapchat yinethiwekhi elingana kakuhle epokothweni yomntu. Ngomxholo ocinywe ngokuzenzekelayo, unika abasebenzisi imo yongxamiseko yokufikelela kwi-Snapchat rhoqo kangangoko kunokwenzeka, kwaye iyanceda abasebenzisi ukuba banxibelelane nabahlobo babo.
Ukukhawulezisa -Kubonakala ngathi kunokuba nzima ukulawula nokulinganisa ukubandakanyeka, kodwa ithuba lokwakha i-1: 1 ubudlelwane kunye nabaxhasi bakho luyafumaneka kwi-Snapchat. Kwaye abantu abangenamkhawulo banokukulandela; Unqunyelwe ekulandeleni iiakhawunti ezingama-6,000 (akuqinisekiswanga ngeSnapchat).
amabali -Ibali le-Snapchat yifoto okanye ividiyo oyithumela kwicandelo lakho lamabali elibonakalayo kuwe nakubo bonke abahlobo bakho. Amabali aphelelwa yiyure ezingama-24.
Advertising -I-Snapchat ibonelela ngeNtengiso ye-Snap, iiGeofilters ezixhasiweyo, kunye neeLensi ezixhasiweyo kukhetho lwabo lwangoku lwentengiso.
Iindlela ezi-3 zeNtengiso kwi-Snapchat
I-Snapchatters zibukele ngaphezulu kwe-10 yezigidi zevidiyo ngosuku, engaphezulu kwama-350% enyakeni ophelileyo kuphela. Tyelela Iintengiso zeSnapchat ngolwazi oluthe kratya kunye netoni yezifundo.
Izaziso ze-Snap -Iintengiso zevidiyo ezime nkqo zemizuzwana eli-10.
Iifayile zeGeofilters -Iifilitha zeefoto ezizodwa zifumaneka kuphela kwiindawo ozichazayo.
Iilensi ezixhasiweyo -Uhlengahlengiso lweefoto okanye iileya ezinokudlalwa ngabasebenzisi kunye nokongeza ii-Snaps zabo.
Eyona ndlela ilungileyo yokuthengisa kwintengiso ye-Snapchat
Cwangcisa iprofayile yakho ye-Snapchat kawonke wonke.
Yenza yakho I-Snapcode.
Sebenzisa i-Snapchat kwimincintiswano, i-sneak peeks, iikhowudi zekhuphoni, emva kwezigcawu, kunye nokwaziswa kwabasebenzi.
Thatha i-5-15 imizuzwana kwaye wenze amabali ayimizuzu engama-1-2.
Thetha ngexesha lakho okanye ibali.
Ifilimu kwaye ungenise iifoto ezithe nkqo.
Thetha nabanye abasebenzisi usebenzisa umthunywa ka-Snapchat.
Sebenzisa isicatshulwa kunye ne-emojis
Nantsi infographic, Kutheni le nto Imicimbi ye-Snapchat yokuThengisa:
tags: emojigeofilterssnap adsngenesnapchat fumanisaUkuthengisa nge-snapchatsnapchat messengersnapcodehlutha amabaliiilensi ezixhasiweyotaco intsimbi lenseiphepha lewebhu
Feb 5, 2017 ngo-5: 14 PM
Ngokwedatha yakutshanje, i-Snap (incoko) inabasebenzisi be-158M be-DAU. Ngapha koko, le app yeselfowuni ijolise kwimarike yaseNtshona: eMntla Melika (e-US, Canada) kwaye (ngokuyinxenye) iYurophu (i-UK, i-FR). Andicingi ukuba “Ngezigidi ezili-150 zabasebenzisi abasebenza mihla le kunye nama-60% abo apapasha mihla le” ayilunganga. Abantu abaninzi basebenzisa i-Snap (incoko) ukuze balandele ezinye ngaphandle kokuthumela amabali.
Feb 8, 2017 ngo-9: 49 AM
Ndikufumanisa kunzima ukusebenzisa kwaye ndihlala ndizibuza ukuba "ndithumele ntoni?" ngaphambi nje kokuya kwi-Instagram okanye ukubuyela ku-Facebook. Kwishishini lahluke kancinci, kuba ukuba uwuchazile umyalezo wakho, ngumcimbi nje wokuziqhelanisa neqonga kwaye udlale kunye ukuze usebenze kodwa iseyinethiwekhi engaqhelekanga ukuyisebenzisa. Siza kubona ukuba benza njani emva kwe-IPO yabo.